China Ọbịbịa ọhụụ na-enye ihe ngosi 360 apai ihe igwefoto ihe ihu igwe na - echekwa ihe na - eme ka ekwentị na - agbado ekwentị na - arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ya | VideoBrochure
Ndị mbata ọhụụ na-enye ihe ngosi 360 apai ihe igwefoto ihe igwe na-eche ihu nyocha akpaghị aka na-agba ọsọ ekwentị nwere njide ekwentị
1. Auto Tracking Selfie Guzosie - Ihu & Object tracking, ezigbo oge lekwasịrị akpọchi, ọ bụrụhaala na ịhọrọ iche na igwefoto interface, nkwụnye ahụ ga-agbaso ihe mgbaru ọsọ iji mezue ọtụtụ Mpaghara agbapụ.
2. Ọdịdị na-enweghị ngwụcha nke 360 ​​Celsius - Ihe njigide nke ogo 360 kwụ, na-akpaghị aka na-enweghị nkuku nwụrụ anwụ.
3. Ogologo oge na-aga n'ihu - Ọgbọ ọhụụ nke algorithm na-azọpụta ike, jikọtara ya na obere ike Bluetooth 5.0 mgbawa, na-enye oge ọrụ 50 na-aga n'ihu. Dabere na ndozi nke batrị AA, ị gaghị echefu ogbugba ma ọ bụ ijide.
4. Ọrụ Dị Mfe - Njikọ akpaaka na-enweghị ịdenye aha na nkuzi dị mgbagwoju anya. Naanị jiri ekwentị mkpanaaka budata software APAI GENIE wee mepee ya, wee jigide aka [Power On] na nkwụnye ahụ maka sekọnd 5, ọ ga-ejikọ na-akpaghị aka. (Usoro nkwado iOS 10.0 na nsụgharị ọhụrụ, gam akporo 8.1 na ụdị ọhụrụ).
360 ogo rotationg auto nsuso smart AI ọnọdụ ekwentị mkpanaaka njide
93 * 93 * 165.4mm (L * W * H) Nkeji
Nkwado nha ekwentị
360 ogo na-akparaghị ókè kehoraizin adiana
37 ogo vetikal tụgharịa elu
Ogologo ogo 37 dị ala
3pcs 1.5V alkaline batrị akọrọ
IOS 10.0 na elu & Android 8.1 na elu
Trackingme ihe nsuso mode, ihu nsuso mode Control ekwentị smart ndị na-agbapụ
1. Q: Kedu ka ụlọ ọrụ gị si eme banyere njikwa mma?
A: Anyị na-eme 3 ugboro nlezianya njikwa njikwa nyocha tupu ebufe iji mesie ezigbo mma.
2. Q: you nwere ike ịnakwere obere iwu?
A: Ee, anabatara obere iwu. Naanị ka anyị mara ole iberibe ị chọrọ.
3. you nwere ike ibipụta logo na ngwaahịa? Stick label na ship ka Amazon FBA nkwakọba?
Sure.We ike ibipute gị logo na ngwaahịa site silk ihuenyo ebi akwụkwọ na laser ebi akwụkwọ maka gị choice.We ike arapara labeelu na ngwaahịa na ụgbọ mmiri na Amazon FBA nkwakọba directly.Just gwa anyị gị zuru ezu chọrọ.
4. Q: Ọ ga-amasị m ịga leta ngwaahịa na nhota gị kachasị ọhụrụ, kedu ka m ga-esi nweta ha?
A: Mmadụ Bịa kpọtụrụ anyị ozugbo site na ozi ntanetị, nyocha ma ọ bụ WhatsApp maka katalọgụ ndị ọhụrụ. Zitere anyị ajụjụ ma ọ bụ email ana-anabata gị.
5. Ntak emi Họrọ Ngwaahịa anyị?
1. Akwa ọkwa AAAA.
2. Factory N'ogbe price.
3. Na ụkpụrụ nyocha ọkachamara, ndị ọrụ QC ọkachamara nyochara.
4. New Trend ngwaahịa na-ekpo ọkụ na-ere nlereanya nweta nkwalite ugboro ugboro.
5. Mbupu ngwa ngwa.
Nke gara aga: Mbadamba ụrọ 10 nke anụ ọhịa Quad isi 1GB + 16 GB / 2GB + 32GB Mbadamba ụrọ PC Na ekwentị Mbadamba ụrọ Nkwado OEM ahaziri Brand
Osote: Macaroon A6s Ikuku ntị ntị maka Redmi Airdots Earbuds Bluetooth 5.0 TWS ekweisi Noise Canceling Mic maka Smartphone
Auto Smart Agbapụ Selfie Stick
Auto Ndepụta Smart agbapụ ekwentị njide
Smart Auto agbapụ ekwentị njide
Kaadị ekele Kaadị 7inch Marketing LCD Kaadị ...